Uyilo olufanelekeRave Ukusuka ku-Runway yeVeki yeFashoni yaseParis 2020
Figumbi I-Christian Dior's ingqokelela-ephefumlelweyo yabasetyhini ukuba I-Miuccia Prada Ukudlala ngendlela eyahlukileyo yokuhombisa kunye nabaqambi abangaphezu kwe-108 bebonisa imbonakalo yabo, IVeki yeFashoni yeParis F2020 ngo-XNUMX iphinde yangqina ukuba ifashoni inokubanika amandla.
Valentino, okholelwa kubunye obudibeneyo obuzisa ubuntu kunye njengoko kutyhilwa ingqokelela egxile kwiiyunifomu. Impahla yefashoni yaseNigeria elungele ukunxiba Kenneth ngoko- uhambise uyilo olwenziweyo ngemisonto emibalabala njengoko wenza iParis yeVeki yeFashoni kwiveki ephelileyo.
Chanel uthathe ithuba elahlukileyo kunye Virginie Viard njengoko ingqokelela yakhe yakutshanje yayinobutsha bomoya kuyo. Issey Miyake kwelinye icala ukuthatha amawele kwinqanaba elitsha lonke njengoko iimodeli zibonwe kwindlela yeenqwelo-moya enxibe iziqwenga zomdibaniso ezihlanganisiweyo.
Uyilo luka-Issey Miyake
Xa esenza intetho yakhe, uLouis Vuitton's UNicolas Ghesquire batsaleleke kwakudala ngelixa bejonga okwangoku. Ngokutsho kwakhe, "Ndifuna ukucinga ukuba kungenzeka ntoni xa ixesha elidlulileyo lisijonga."
Ngokubanzi, umaleko, imbonakalo yemonchromatic, udaka olubuthathaka, isikhumba esityebileyo, i-cyborg-esque egxunyekwe iipads, umphetho ovuthayo, amathafa, izithsaba zemidlalo, iibhuthi zazo zonke ubude nangaphezulu koko kwenzeka kubaqulunqi bemiboniso kwiVeki yeParis yeVidiyo esele ilindelwe. Siwele ngo-2020.
Ukutsho ngeVeki yeParis yeFashoni ka-2020 ibingamabhaso e-sartorial angazange abonwe ngaphambili iya kuba yinto ephantsi. Abaqulunqi bazise umdlalo wabo we-A, siwuthandile kwaye banciphise eyona imbonakalo ifanelekileyo ye-rave esuka kwi-PFW FW20.
Jonga ezinye zezona zoyilo zintle ezivela kwiVeki yeParis yoFashoni yoBusika / ubusika 2020…
UDries Van Noten
UAlexander Mcqueen Balenciaga Balmain chanel Ukuhanjiswa kobuKristu I-Comme des Garçons UDries Van Noten Elie saab Giambattista valli Givenchy IHaider Ackermann Isabel Marant Issey Miyake Kenneth ngoko- Lacoste Lanvin ilouis vuitton Miu Miu UMugler Ngaphandel uBumhlophe IVeki yefashoni yaseParis 2020 IVeki yefashoni yeParis Iwa ngo-2020 PFW FW20 I-rick owens Sacai Valentino
Uhlobo Rave Matshi 5, 2020
I-Elfonnie HlelaIimpawu ezi-5 ezingafunekiyo ukuba usayinxibe loo wigi
I-Rave News Digest: U-Katy Perry Ukhulelwe, amagama e-Buhari eNtsha njengoBongameli, u-Eric Dier + Ngaphezulu
I-LVMH ngoku ivelisa abaCoci bezandla ukulwa i-Coronavirus eFrance